Izinkinga Ezikhathaza Izikhumba zeZingulube - Iziphazamisi Eziningi Ezingaphandle
Umkhaza ungaphila ezindaweni zokuhlala ezikhungweni zezingulube, iminyango yama-warthog noma amakhaya abantu, kuyilapho ama-tick aqinile atholakala emadlelweni. Amathikithi avame ukuphuma ebusuku bese ancela igazi lezingulube, abantu nezinye izilwane. Phakathi nosuku, bazofihla emifantwini nasezintweni noma ngaphansi komhlaba. Akukona nje ukuthi kubangelwa i-anemia nokucasula okukhulu, okungahle kube nomthelela omubi ekutheni ukondliwe futhi kuholele ekuthelelekeni kwesibili, kepha kungase kube nmfiva.
Ukwelashwa kwezingulube ngeke kuwanele, izindawo zokukhosela nazo kuzodingeka zihlungwe nge-disinfected futhi zihlanzwe. Buza uchwepheshe wezempilo wezilwane noma udokotela wezilwane ukutusa uhlelo lwezokwelapha futhi ugcine izingulube zivalelwe futhi zingabikho ezigodini zezilwane nezinye izilwane ezingase zithathe imikhaza.
Izimpukane azizona nje izicasula, kodwa zingathatha izifo futhi zibangele izifo. Izimpukane eziqinile ziyingayizi encane futhi zihlala zibolile izimila, umquba nomquba. Bahlala ezingulube, bancelise igazi labo futhi bangadlulisela i-African fever fever phakathi kwezingulube.
Ama-blowflies aphakathi nosayizi obukhulu noma obukhulu futhi ngezinye izikhathi akhanyayo okwesibhakabhaka noma aluhlaza okombala. Bazala ngodayi nokubola okubonakalayo, kufaka phakathi izilwane ezifile, bedla amanxeba wezingulube futhi bangavimbela amanxeba ekuphulukisweni.
Izindlu zezindlu zinezinwele ezinobukhulu futhi obuphakathi. Bondla imfucumfucu, i-fresh and rotting material futhi ingadlulisela izifo phakathi kwezingulube.
Ama-infestation ama-Fly kufanele avinjelwe ngokugcina izindawo zihlanzekile lapho kuhiqizwa khona izingulube futhi kuqinisekiswe ukuthi azikho izindawo ezizalisayo eduze kwe-sties. E-South African Pork Producers Organisation 'Izingulube zenzuzo yenzuzo, kuphakanyiswa ukuthi abalimi basebenzisa ama-sprays ngamagundane ngezinambuzane ezinamaphiko noma amacembe okumboza ngeVaseline ukuze bavikele amanxeba ezimpukane. Ukufaka amaqabunga owomile, amaqabunga epulasitiki noma indwangu yomthunzi angasiza futhi ukugcina izimpukane zingabikho izingulube.
Izinhlanzi yizinambuzane ezincane ezithenga. Nakuba ama-fleas awabheki njalo nezifo, ama-infestation amakhulu angabangela i-anemia njengoba edla igazi lezingulube. Ngokuvamile zifihla emifantwini nasezingxenyeni ezitsheni noma esihlabathini.
Xhumana nochwepheshe wezempilo wezilwane noma udokotela wezilwane mayelana nokucwilisa noma i-powder ukusebenzisa futhi ugcine izingulube zakho kude nezinye izilwane, ezifana nezilwane ezifuywayo, okungenzeka kube yizintambo zefleas.